Somaliland iyo Khaatumo oo heshiis rasmi ah wadda saxeexday – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Waxaa maanta magaaladda Hargeysa heshiis rasmi ah kuwadda saxeexday xukuumadda Somaliland iyo maamulka khaatumo. Heshiiskan oo ka koobnaa shan qodob.
Shirkan jaraa’id ee lagu shaacinaayey heshiiskan waxaa masuuliyiintii ka soo qayb-galay ka mid ahaa Wasiirka Arimaha dibadda Somaliland, hogaamiyaha khaatumo Dr. Cali Khaliif Galaydh, Gudoomiyaha xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, iyo masuuliyiin kale oo xukuumadda iyo asxaabta qaranka ka tirsan.
Heshiiskan oo uu warbaahinta u akhriyey wasiirka Arimaha Dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa nuxurkiisu u dhignaa sidan:
Somaliland iyo Khaatumo inay ku dedaalaan sidii afgarad buuxa looga wada gaadhi lahaa.
In shir dambe layskugu yimaado 10-ka July laguna qabto magaalada Burco si lo odhameeyo wixii qabyada ah lagana tashado qaabkii iyo hanaankii loo qaban lahaa shir loo wada dhan yahay.
Heshiiskan waxaa qalinka si rasmi ah ugu wadda duugay, wasiirka Arimaha Dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire iyo Gudoomiyaha Weftiga Khaatumo Maxamuud Sheekh Cumar Xasan ahna gudoomiyaha maamulka khaatumo ee Baarlamaanka.
Halkan ka daawo warka heshiiskan: